for Blog Day | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
← Roses Intro
Wu Xia →
for Blog Day
ကိုအောင် (ပျူနိုင်ငံ) က Tag (တဂ်) ထားတယ်လို့ အကြောင်းကြားပါတယ်။ သူရေးထားတဲ့ ဘလော့ဂ်ဒေးအတွက် အမှတ်တရများ အပိုင်း ၃ ပိုင်းကိုလည်း သေချာဖတ်ကြည့်တယ်။ လွမ်းစရာ ဘလော့ဂ် လောကကြီးကို ပြန်တွေ့တယ်။
ဟိုတုန်းက (၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ လောက်က) တယောက်နဲ့တယောက် တဂ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အတော်ကြီး ထွန်းကားခဲ့ဖူးပါတယ်။ (တဂ်ထားတယ်ဗျို့ဆိုပြီး ကိုပီကေက ဘလော့ဂ်တခုတောင် ထောင်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ ကိုပီကေကြီးလည်း ဘုန်းကြီးဝတ်သွားတယ်ဆိုလား၊ ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် ပျောက်သွားသလို တဂ်ဘလော့ဂ်လည်း အသက်မဝင်တော့တာ ကြာပါပြီ။) တကြိမ်မှာတော့ တဂ်တိုင်းမရေးနိုင်လို့ မတဂ်ပါနဲ့လို့ ထပြောသူပြော စိတ်မကောင်းဖြစ်သူဖြစ်ကြရာကနေ အထင်လွဲအခင်လွဲတွေ ဖြစ်ကြရဖူးပါတယ်။
မြန်မာဘလော့ဂ်လောက ဝုန်းကနဲ ကြီးထွားသွားတာ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကာလနဲ့ ၂၀၀၈ ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ် ကာလတွေမှာပါ။ အခုတော့ မှန်တန်း တိုးတက်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျနော်က ၂၀၀၅ ကတည်းက ဘလော့ဂ်ကို ကလိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အဖြစ်မရှိ။ ၂၀၀၆ မှာ ရေးပြန်သည်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာစာ မရိုက်တတ်သေး။ ၂၀၀၇ မှာမှ စိတ်က ဇောသန်လွန်းတာနှင့် မြန်မာစာလည်း ရိုက်တတ်သွားပြီး ဘလော်ဂါ စစ်စစ်ဖြစ်လာပါတယ်။
ဘလော့ဂ်လုပ်နည်းတွေ ရေးနည်းတွေ ကိုညီလင်းဆက်၊ ကိုမောင်လှတို့လို ပိုင်အိုးနီးယားကြီးတွေဆီက သွားသွားဖတ်၊ ကလိပေါ့။
အဲဒီတုန်းက ဘလော့ဂ်လောကဟာ ပျော်စရာကြီး။ အသိုင်းအဝိုင်းတွေ အချိတ်အဆက်တွေလည်း ကျယ်လာကြ။ လူတွေလည်း မနည်းဘူး။ စာရေးကောင်းတဲ့သူတွေ၊ စာဖတ်နာတဲ့သူတွေ၊ ခေသူမဟုတ်တွေ အများကြီး ထွက်ခဲ့တာပေါ့။
အဲဒီတုန်းက တည့်လိုက်ကြ တပြုံးပြုံး ရန်ဖြစ်ကြ တဝုန်းဝုန်းပေါ့။ နိုင်ငံရေးဘလော့ဂ်တွေရဲ့ ဘလော့ဂ် စစ်ထိုးပွဲတွေကလည်း ပရိသတ် တရုန်ရုန်းနဲ့ပါပဲ။
အများစုက ဘလော့ဂ်လောကကနေ အသံမပေးဘဲ ခြေရာပျောက်သွားကြတယ်။ တချို့က အနားယူသွားကြတယ်။ အနည်းစုလောက်ပဲ ပုံမှန်ဆက်ရေးကြပေမယ့် သိပ်မသွက်နိုင်ကြတော့ဘူး။
၂၀၀၇ ဝန်းကျင်က ဘလော့ဂ်တွေစာရင်းကို ဒီနေရာမှာ တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။
ညီလင်းဆက် လုပ်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ် လမ်းညွှန်ကတော့ ၂၀၀၉ အထိ စာရင်းရှင်သေးတယ်။
ကိုပီကေကလည်း သူ ဘလော့ဂ်လမ်းညွှန် လုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီး ကျနော့်ကို တိုင်ပင်ဖူးတယ်။ သူလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပီကေ ဘလော့ဂ်ရဲ့ ညာဘက်အစွန်ဆုံးများ ဒေါင်လိုက်ရေးထားတဲ့ ခလုတ်တွေထဲက အပေါ်ဆုံးက Bloggers ဆိုတာကို နှိပ်ကြည့်ပါ။
ရေးတဲ့သူတွေလည်း ဆက်ရေးဆဲဖြစ်ပြီး မရှိတဲ့ဘလော့ဂ်တွေလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီစာရင်းတွေမှာ အကုန်ပါတယ်မဆိုနိုင်ပေမယ့် ထိုစဉ်က စုထားဖို့ စိတ်ကူးရသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခု အသစ်လုပ်ထားတဲ့ ဘလော်ဂါများရဲ့ ပို့စ်များ ဘလော့ဂ်မှာ အသက်ဝင်နေဆဲဘလော့ဂ်တွေ၊ ဘလော့ဂ်သစ်တွေကိုပါ ထည့်တွက်လိုက်ရင်တော့ အတော်ကြီး မြန်မာဘလော့ဂ်လောက လူစုံကို မြင်ရနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
ယူနီကုဒ်နဲ့ရေးတဲ့ ဘလော့ဂ်တချို့စာရင်း ဒီနေရာမှာ ရှိပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေနဲ့ရောနေတာမို့ ကိုယ့်ဖာသာ ရှာကြည့်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
(၃) ဘာလို့ ဘလော့ဂ် ဆက်မရေးကြတာလဲ
ဘာလို့ ဘလော့ဂ် ဆက်မရေးဖြစ်ကြလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်တော့ ဒီအချက်တွေကို တွေ့တယ်။
-ပညာတော်သင်ကာလ ပြီးဆုံးလို့ ပြန်ကြပြီ။ လုပ်ငန်းခွင်၊ တာဝန်တွေမှာ နစ်သွားကြပြီ။
-ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေ ပေါ်လာတာကြောင့် ဘလော့ဂ်ကို ပိတ်ပစ်လိုက်တာ။
-Account ပတ်စ်ဝပ် မေ့ပျောက်သွားတာ။ အမှားအယွင်းလုပ်မိလို့ ဘလော့ဂ် ပျက်စီးသွားတာ။
-အိမ်ထောင်ကျကုန်လို့ ဘလော့ဂ်ကို လှည့်မကြည့်နိုင်တော့။ (အိမ်ထောင်ပြု သားမွေးမို့လို့၊ တချို့က ယောက်ျားရပြီးတော့ ယောက်ျားက မကြိုက်လို့ မရေးရတော့တာရှိသေး)
-ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရတာက Facebook, Google+ တို့လို ဆိုရှယ်ကွန်ရက်ဘက် လိုင်းပြောင်းသွားတာ။
အွန်လိုင်းလောကမှာ၊ ဘလော့ဂ် အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဒီလို ဒွိယံတွေ သတိထားမိတယ်။
ဘလော့ဂ့်စပေါ့ သုံးသူ – ဝါ့ဒ်ပရက်သုံးသူ
ဘလော့ဂ်သမား – ဖိုရမ်သမား
ပြည်တွင်းကလူ – ပြည်ပကလူ
လူဝတ်ကြောင် – သာသနာ့ဝန်ထမ်း
သေချာအားထုတ်ပြီးရေးသူ – သူများရေးတာ ကူးတင်သူ
ဇော်ဂျီဖောင့်သမား – ယူနီကုဒ်သမား
စိတ်အဆာပြေရေးသူ – အသိအမှတ်ပြု ခံလိုသူ
နေ့စဉ်မှတ်တမ်းသဘော ရေးသူ – စိတ်ကူးကမ္ဘာအဖြစ် ဖန်တီးပြီး ပျော်ဝင်နေသူ
ကျနော်လည်း တွန်းရွေ့တွန်းရွေ့နဲ့ မသွက်သည့်တိုင် ဘလော့ဂ်တော့ ရေးဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ခု အချိန်ရခိုက် ရေးဖြစ်သွားအောင် တွန်းအားတခုပေးလိုက်တဲ့ ကိုအောင် (ပျူနိုင်ငံ) ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အပေါ်က ရေးခဲ့သမျှတွေမှာ ဘလော်ဂါနာမည်တွေကို ကျနော် မထည့်ဘဲ တမင် နေရာတိုင်းမှာ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။ ကျန်ခဲ့သူတွေ ရှိရင် အားနာလို့ပါပဲ။
ခုရေးထားတဲ့ပို့စ်မှာ လိုတာတွေရှိရင် ထပ်ဖြည့်သွားပါမယ်။
5 responses to “for Blog Day”
ေပ်ာ္စရာေကာင္းခဲ့တဲ့ ေန႕စြဲေတြ၊ စိတ္တုိစရာ ေကာင္းခဲ့တဲ့ ရက္စြဲေတြ၊ လြမ္းစရာ ေကာင္းခဲ့တဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြ
ကို သတိရတယ္ဗ်ာ၊ က်ေနာ္ တက္ဂ္ကို အခုလုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွဳေထာင့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေန အပင္ပန္းခံ
ေရးေပးတာ ေက်းဇူးကမၻာပါ ကိုသင့္ကာ ေရ ….
ကိုသင္ကာ႔စာကို မေလး ဖတ္မရဘူး။ ဘယ္လိုေျပာင္းဖတ္ရမယ္ ေျပာျပေစလိုပါတယ္ရွင္။
Myanmar3 ေဖာင့္ ထည့္ထားရင္ ဖတ္လို႔ရပါၿပီ။ က်ေနာ္လည္း Font ဆိုၿပီး ေပးထားပါတယ္။ အဆင္ေျပပါေစ။
ကုိသင္ကာႀကီး… ေရာက္သဗ်…..။ ဘာလို႕ ဘေလာဂ္ဆက္မေရးၾကတာလဲ ? အမ်ားသား….